सेयर वा रकम समयमै प्राप्त नभएमा के गर्ने ? - Arthasansar
सेयर वा रकम समयमै प्राप्त नभएमा के गर्ने ?
आइतबार, ०६ असार २०७८, ०६ : ०४ मा प्रकाशित
नेप्सेको वेबसाइटमा उल्लेखित फोन नम्बरमा वा ईमेल मार्फत पनि लगानीकर्ताहरुले गुनासो गर्न सक्नेछन् ।
धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन हुँदा धितोपत्र खरिद सम्बन्धी गुनासा सम्बन्धित निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्ध गर्ने संस्था, निष्कासनकर्ता कम्पनी तथा नेपाल धितोपत्र बोर्ड समक्ष राख्न सकिन्छ ।
सूचीकृत धितोपत्र खरिद बिक्री सम्बन्धी गुनासाबारे सर्वप्रथम धितोपत्र दलाललाई जानकारी गराउनुपर्दछ । धितोपत्र दलालबाट सन्तुष्ट नभएमा आफ्नो गुनासो लिखित रुपमा स्टक एक्सचेन्जमा राख्न सकिन्छ । यस्तो गुनासो समाधान नभएमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड समक्ष राख्न सकिन्छ ।